အတွေးအခေါ်နှင့် လမ်းစဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » အတွေးအခေါ်နှင့် လမ်းစဉ်
Posted by kai on Oct 28, 2010 in Politics, Issues, Think Tank |0comments
အတွေးအခေါ်နှင့် လမ်းစဉ် (ခင်မမမျိုး)
အကယ်၍ အာဏာခွဲဝေသုံးစွဲသည့် ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖြစ်လာနိုင်ချေများ လုံးဝမရှိသည့်အခါ (သိုမဟုတ်) နှစ်ဘက်စလုံးတွင် သမိုင်းကြောင်းအရ ကြမ်းကြုတ်သော ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် တဦးပေါ်တဦးယုံကြည်မှု လုံးဝဥဿုံကင်းမဲ့နေသည့်အခါ (သို့) နှစ်ဘက်စလုံးမည်သူမျှ အောင်ပွဲရတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း သေချာလာသည့်အခါတွင် ကုလသမဂ္ဂကြီးကြပ်မှုဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြားဖြတ်အစိုးရများကို ဖွဲ့စည်းရလေသည်။ နာမီးဘီးယား (၁၉၈၉–၁၉၉၀)နှင့် ကမ်ဘောဒီးယား (၁၉၈၃–၉၃) အခြေအနေများသည် အဆိုပါပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်၏ ဥပမာများပင်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့သော ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များတိုင်း အောင်မြင်သည်ကား မဟုတ်ပါ။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ (၁၉၉၀)ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းကာလများအခြေအနေသည် မအောင်မြင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြားဖြတ်အစိုးရကနဦး ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ ထို့အပြင် အခြားအရေးကြီးသော အချက်မှာကား သူတပါးနှာခေါင်းဖြင့် အသက်ရှူသူများသည် ကိုယ့်နှာခေါင်းဖြင့် အသက်ရှူရန် ခဲယဉ်းသည့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်များပင်ဖြစ်သည်။
ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်ဆောင်သည့် အစိုးရတရပ် ပေါ်ထွက်လာရေးဆိုသော အခြေခံ ပန်းတိုင်ကို လက်ခံရုံနှင့် ပြီးသေးသည်ကား မဟုတ်ပဲ ဦးတည်သော ကြားဖြတ်အစိုးရအသွင်ပေါ်မူတည်၍ ပိုမိုအာရုံစိုက်လုပ်ရမည့် လမ်းကြောင်းများ၊ လျှော့ရမည့် လမ်းကြောင်းများလည်း ရှိလာတတ်သည်။ ဥပမာ– လူထုတိုက်ပွဲနှင့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကို အာရုံစိုက်သည်ဆိုလျှင် တော်လှန်ရေးကို လူထုနှင့် တသားတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရပါမည်။ ပြည်သူအများအား ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစိတ် ဖြစ်လာစေရန် တွန်းအားပေးရပါမည်။ မျှော်တော်ယောင်ဖြစ်အောင် အခုပဲ နိုင်ငံတကာ ၀င်လာတော့မည်ဆိုလိုက်၊ အခုပဲ လူထုနည်းနဲ့မှ အောင်မြင်တော့မည်ဆိုလိုက် လုပ်နေခြင်းမှာ တိုက်ပွဲအတွင်း တွေဝေမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ယခုဆက်လက်ပြီး Political liberalization အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံရေးသဘောတရားများကို တင်ပြပါမည်။
Political Liberalization အတေွး အခေါ်
Political Liberalization ဆိုသည်မှာ အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ civil liberties များ ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်မှုများ လျှော့ချခြင်း (ease of repression) လုပ်ခြင်းများကို ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုပါအတွေးအခေါ်အား အာဏာရှင်တို့ဘက်က ကျင့်သုံးလာချိန်တွင် အာဏာရှင်ရွေးကောက်ပွဲ
(authoritarian elections) များ ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်၏ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်သော democratic consolidation ကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အတွေးအခေါ် တရပ်ဖြစ်သော်လည်း political liberalization နှင့် initial
transition မှာ ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ Initial transition ကို ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်
(Democratization)၏ ကနဦးအစိတ်အပိုင်း အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော်လည်း political liberalization
ကျင့်သုံးအကောင်အထည်ဖော်မှု ဖြစ်ရပ်တိုင်းအား ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု၏
ကနဦးအစိတ်အပိုင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါ။
နိုင်ငံရေးပညာရှင်များက အဆိုပါ ကွဲပြားခြားနားမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မီးမောင်းထိုးပြလေ့ရှိကြပါသည်။
Holger နှင့် Schlumberger တို့က political liberalization နှင့် ဒီမိုကရေစီ
အသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်တို့မှာ နောက်ဆုံးရလဒ်အဖြေ (end result) ပေါ် မူတူ၍ ကွဲပြားကြောင်း
ရေးသားခြဲ့ကပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်မှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ် အမြစ်တွယ်
ခိုင်မာရှင်သန်မှုရှိရန် ဦးတည်သည့် ရှင်းလင်းသော နောက်ဆုံးရလဒ် ရှိသော်လည်း၊ political
liberalization မှာကား ဒီမိုကရေစီစနစ် အမြစ်တွယ် ခိုင်မာရှင်သန်မှု (Democratic consolidation) သို့
ဦးတည်ခြင်းမရှိပဲ လမ်းတ၀က်တွင်ပင် အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ liberalization ကို ရပ်ဆိုင်းကာ
အာဏာပြန်သိမ်းပြီး၊ authoritarian စနစ်ကို အသက်ပြန်သွင်းခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ တပိုင်းတစ
ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းများလဲ ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် တိကျသော end result ကို သတ်မှတ်၍ မရနိုင်ကြောင်း
သုတေသနပြုချက်များအရ တွေ့ ရှိခြဲ့ကပါသည်။
နိုင်ငံရေးပညာရှင် Pool ကလဲ Political Liberalization ဆိုသည်မှာ ဒီမိုကရေစီ၏ အခြေခံ
သဘောတရားများကို မိတ်ဆက်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို ဦးတည်ဖော်ဆောင်သည်ဟု
မည်သူမျှ တပ်အပ်သေချာ မပြောနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးပညာရှင်
Monshipouri က Political Liberalization ဖြစ်ရပ်တိုင်းတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက်မှု
ဖြစ်မလာနိုင်သော်လည်း political liberalization ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အာဏာရှင်တို့၏ သက်တမ်းကို
ဆွဲဆန့်ပေးနိုင်ကြောင်းနှင့် အာဏာရှင်တို့ ရင်ဆိုင်ရတတ်သည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး
အကျပ်အတည်းများကို ရေတို ဖြေရှင်းခြင်း အတွေးအခေါ်တခုအဖြစ် အသုံးချနိုင်ကြောင်း
ရေးသားဖော်ပြခ့ပဲါသည်။ ဖံွ့ ဖြိုးဆနဲိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေတတ်သည့် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများ၊
စစ်ပွဲများ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပြဿနာများကို political liberalization အတွေးအခေါ်ဖြင့် ဖြေရှင်းပါက
ညင်သာသော ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများ ရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါနိုင်ငံများရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို
ဒီမိုကရေစီ စနစ်အတွက် ကြိုတင်မိတ်ဆက်ပြင်ဆင်ပေးရာ ရောက်ကြောင်း Monshipouri က
Political Liberalization နှင့် ကနဦးဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုတို့သည် ဤသို့
ကွဲပြားခြားနားနေသော်ငြား political liberalization သည် civil liberties အချို့ကို အကာအကွယ်
ပေးနိုင်လာသဖြင့် expansion of public space ဖြစ်ကြောင်းကိုကား ပညာရှင်အများစုက
တညီတညတ်ွတည်း လက်ခံထားခြဲ့ကပါသည်။ ခြုံငုံကြည့်ပါက political liberalization ဆိုသည်မှာ
အာဏာရှင်တို့မှ ပိတ်ဆို့ထားသည့် တံခါးအား အနည်းငယ် ဟပေးခြင်းဖြင့် လူတဦးချင်း၏
အတွေးအမြင်ဖော်ပြချက်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လှုပ်ရှားမှုနှင့် နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုတို့ကို
အကန့်အသတ်ဖြင့် ခွင့်ပေးခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ သို့ရာတွင် အာဏာရှင်တို့ ဖွင့်ပေးသော အပေါက်မှ
အာဏာရှင်တို့ ချုပ်ကိုင်ထားသော အိမ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ရာ ဧည့်သည်တို့၏
ထုံးစံအတိုင်း အိမ်ရှင်များ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းကိုတော့ လိုက်နာရန် လိုအပ်ပေသည်။
ဧည့်သည်များမှ စည်းကမ်းကို မလိုက်နာလျှင်ကား အိမ်ပေါ်မှ နှင်ချ၍ ဖွင့်ထားသော တံခါးကို
အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ အချိန်မရွေး ပြန်လည် ပိတ်ပိုင်ခွင့်လည်း ရှိလေသည်။ ယင်းမှာ political
liberalization အတွေးအခေါ်၏ အခြေခံ သဘောတရား ဖြစ်လေသည်။
political liberalization သည် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ အရောက်လှမ်းရေးကို
ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်သည်လား (၀ါ) political liberalization အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်စွဲခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီ
ရနိုင်သလား ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍မူ အယူအဆနှစ်မျိုး ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ တမျိုးက political
actors များပေါ်တွင် မူတည်သည့် အတွေးအမြင် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အယူအဆအရ
ဒီမိုကရေစီအရေးတွင် အာဏာရှင်များဘက်၌ hardliners နှင့် softliners ဆိုသော
နိုင်ငံရေးဇာတ်ကောင်နှစ်မျိုး ပေါ်ထွက်လာပြီး၊ အတိုက်အခံများဘက်၌ opportunists, moderates နှင့်
radicals ဆိုသော နိုင်ငံရေးဇာတ်ကောင် သုံးမျိုး ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါသည်။
Hardliners ဆိုသူများမှာ အာဏာရှင်စနစ်ကိုပင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲလိုသူများဖြစ်ပြီး၊ softliners
ဆိုသူများမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် အတိုက်အခံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကို လိုလားသူများဖြစ်သည်။ opportunists ဆိုသူများကား ဒီမိုကရေစီစနစ်
တည်ဆောက်ရေးကို စိတ်ဝင်စားသူများ မဟုတ်ပဲ ဒီမိုကရေစီ အရေးကို အကြောင်းပြု၍
ကိုယ်ကျိုးရှာလိုသူများဖြစ်သည်။ moderates ဆိုသူများကား ဒီမိုကရေစီစနစ် ခိုင်မာရှင်သန်ရေးကို
လိုလားသူများဖြစ်ပြီး၊ မည်သို့သော ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်စေ လက်ခံနိုင်သူများ ဖြစ်သည်။ radicals
ဆိုသူများကား အာဏာရှင်တို့နှင့် compromise မလုပ်ရသော ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို
ဖော်ဆောင်လိုသူများ ဖြစ်သည်။ လက်တင်အမေရိက ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု သင်ခန်းစာများအရ
political liberalization ကို အာဏာရှင်ဘက်မှ softliners များနှင့် အတိုက်အခံဘက်မှ moderates
များက ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်လျှင် ဒီမိုကရေစီ ခိုင်မာရှင်သန်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်သို့
ရောက်သွားနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြလေသည်။
အခြားအယူအဆတခုမှာကား အာဏာရှင်တို့တွင် အာဏာရှင်စနစ်ကို ထိန်းသိမ်းထားလိုသောအုပ်စုနှင့်
အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံး၍ မဖြစ်နိုင်ဟု ယူဆသော အုပ်စုနှစ်စု ကွဲပြားသွားသဖြင့်
အာဏာရှင်တို့အကြား အကွဲအပြဲ (intra-regime factionalism) နှင့် စစ်တပ်မှ
ခေါင်းဆောင်အချို့ခွဲထွက်ပြီး အတိုက်အခံတို့နှင့် ပေါင်းသွားသည့်အခါ ဖြစ်လာလေ့ရှိသော intramilitary
factionalism များ၊ degradation of military institution ဖြစ်ခြင်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်
political liberalization ကို အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်များက အကောင်အထည်ဖော်လာသည်ဆိုသော
အယူအဆဖြစ်လေသည်။ ဤအယူအဆအရ political liberalization ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်
အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ paradox of success ကို သေချာစေရန် ဆောင်ရွက်ရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အာဏာရှင်တို့ ကြိုးကိုင်နိုင်သည့် ပါတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာဏာရှင်တို့၏
ရပ်တည်မှုကို မထိပါးစေသော ဥပဒေများ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြိုးကိုင်နိုင်သည့် ပါတီများသာ
အနိုင်ရနိုင်မည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများ ပြဌာန်းခြင်း စသည်တို့မှာ political liberalization ၏
လိုအပ်ချက်တရပ်ဖြစ်သော အဆိုပါ paradox of success စည်းမျဉ်းကို ဖော်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
paradox of success မသေချာပဲနှင့် political liberalization ကို မည်သည့် အာဏာရှင်ကမှ
အထက်ဖော်ပြပါ အယူအဆနှစ်မျိုးအနက် ပထမအယူအဆမှ ကြည့်လျှင် political liberalization သည်
ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်အရောက်လှမ်းရေးကို ဦးတည်သည့် အတွေးအခေါ် ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယအယူအဆမှ
ကြည့်လျှင်ကား political liberalization သည် အာဏာရှင်စနစ်ကို ပုံစံတမျိုးဖြင့် ရေရှည်
ရှင်သန်နေစေနိုင်သည့် dead end ဖြစ်နေသော အတွေးအခေါ် ဖြစ်လေသည်။ လက်တင်အမေရိက
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်များအရ ပထမအယူအဆက မှန်ကန်ပြီး၊
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့် အာရှတိုက် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်များအရ
ဒုတိယအယူအဆက မှန်ကန်နေသည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတနိုင်ငံ ကြုံတွေ့လာမည့် political realities
အခြေအနေကိုကား ခန့်မှန်းရ အလွန်ပင် ခက်နိုင်ပါသည်။
မည်သို့ဆိုစေ အာဏာရှင်တို့၏ political liberalization ဖော်ဆောင်မှုများကို public space
ချဲ့ပေးခြင်းဟု ရှုမြင်၍ ပထမအယူအဆကို လက်ခံကျင့်သုံးလိုသော moderates များအနေဖြင့်
ရလိုရငြား စမ်းသပ်ကြည့်လိုသည်ဆိုလျှင် political liberalization မှ democratic consolidation သို့
ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းမှုများတွင် တွေ့ကြုံနိုင်သည့် obstacles များကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ပေသည်။
အဆိုပါ obstacles များကို ကျော်လွှားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ကြံဆရှာဖွေသင့်လေသည်။ Political
liberalization စတင်လာပြီးမှ ပြောင်းပြန်ဦးတည်သွားသော political deliberalization မဖြစ်စေရန်
political liberalization အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်စွဲ၍ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ သွားရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် civil
society ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အလွန် အရေးပါလှသည်။ နိုင်ငံတော်မှ ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မှု ကင်းရှင်းသည့်
အစုအဖွဲ့များ၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပညာတတ်လူပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော active civil society
ရှင်သန်လာရေးသည် အရေးကြီးလှသော လိုအပ်ချက်တရပ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများသည်
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ဒီမိုကရေစီ စံများကို နားလည်ကျင့်သုံးလာစေရေး၊ ကွဲပြားခြားနားမှုများအကြားမှ
ညီညွတ်မှုကို နားလည်လက်ခံလာစေရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ
ရှိလာစေရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်၏ ၀င်ရောက်စွက်ဖက် ကြိုးကိုင်
ချယ်လှယ်မှုများနှင့် တတ်နိုင်သမျှ ကင်းရှင်းရမည် ဖြစ်လေသည်။ သို့မှသာ နိုင်ငံတော်၏
ပါဝါချိန်ခွင်လျှာကို တဘက်တလမ်းမှ ထိန်းကျောင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအား နိုင်ငံတော်မှ
ထိန်းချုပ်ထားမှုကို အားပျော့စေမည် ဖြစ်သည်။ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (အန်ဂျီအို)
များသည် state နှင့် society တို့ အကြားတွင် buffer zone အဖြစ် ရပ်တည်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
political liberalization ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် နိုင်ငံအများစုတွင် civil society အဖွဲ့
အများစုကို အာဏာရှင်တို့က ကြိုတင်ဖွဲ့စည်း ထိန်းချုပ်ထားသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် civil
society အားကောင်းလာစေရန် ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍများမှ ထိုးဖောက်နေသည့်
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ပုံမှန် စောင့်ကြည့်လေ့ရှိပြီး၊ အဆိုပါ အဖွဲ့များနှင့်
လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် အာဏာရှင်တို့နှင့် ကြိုးကိုင်အဖွဲ့များအား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်လာမည့်
အခြေအနေရှိမရှိကို အကဲဖြတ်လေ့ရှိသည်။ အာဏာရှင်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပ၍
နိုင်ငံတကာရေးရာတွင် international legitimacy ရစေရန် ကြိုးပမ်းထားသော ကြိုးကိုင်အစိုးရများ၏
ရပ်တည်မှုကို ထိခိုက်လာနိုင်သည်ဟု ယူဆပါက public space ကို ပြန်လည်ကန့်သတ်သည်။
လိုအပ်လာပါက အမျိုးသားလုံခြုံရေး (national security concerns) ကို အကြောင်းပြ၍ civil society
ကို ဖိနှိပ်ရန်နှင့် အာဏာပြန်သိမ်းနိုင်ရန် ဥပဒေများ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည်။ သို့ဖြစ်ရာ
အာဏာရှင်တို့၏ political liberalization ကို အခွင့်အရေးဟု သတ်မှတ်၍ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့
အရောက်သွားရန် ကြိုးပမ်းလိုသူများသည် အဆိုပါ obstacles များကို မည်သို့
ကျော်လွှားမည်နည်းဟူသော လမ်းစဉ်များကို စဉ်းစားထားကြရန် လိုအပ်သည်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင်စနစ် တည်တံ့ခိုင်မြဲနေရခြင်း အကြောင်းတရား
များတွင် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များလည်း ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏
နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်၏ အခြေခံသဘောတရားများနှင့် ကွဲပြားခြားနားပြီး၊
အာဏာရှင်ဆန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းသဏ္ဍာန် ဖြစ်တည်နေပါက ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရှင်သန်ခိုင်မာရေးကို
အတားအဆီး ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ဖံွ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုကို ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်
“patrimonialism” ဆိုသော သဘောတရားက လွှမ်းမိုးထားပါသည်။
“patrimonialism” ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည် အလုပ်အတူ တွဲလုပ်ရမည့်
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ငယ်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ၀န်ထမ်းများကို သူတို့နှင့် နီးစပ်သော
အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းမှ မိသားစုဝင်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သစ္စာရှိသူဟု ယူဆထားသူ များကိုသာ
ရွေးချယ်တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင်သာမက အတိုက်အခံတို့၏
နိုင်ငံရေး အ၀န်းအ၀ိုင်းတွင်ပါ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ကြသည့်အခါ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၏ အနီးတွင်
ရှိနေသူများသည် လိုအပ်လျှင် ခေါင်းဆောင်များကို ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ ပေးနိုင်မည့် အရည်အချင်းရှိ
ပုဂ္ဂိုလ်များ မဟုတ်ပဲ ခေါင်းဆောင်များ အလိုကျ ခေါင်းညိမ့်လက်ခံပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှု
နိုင်ငံရေးရာများတွင် အရည်အသွေးက အဓိကမကျပဲ မည်သူ့သားသမီး၊ မည်သူ့ဆွေမျိုးသားချင်း
ဆိုသည်က အရေးပါလာသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်သူများကသာ များပြီး၊ ဝေဖန် ပိုင်းခြားဥာဏ်ဖြင့်
သတိပေးနိုင်သူများက အနီးတွင် မရှိသည့်အခါ ခေါင်းဆောင်များ၏ ငါတကော ကောကာ
လုပ်ဆောင်မှုများ ပေါ်ထွက်လာတတ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်များပင်ဖြစ်စေကာမူ
ဤသဘောတရား၏ လွှမ်းမိုးမှုများကို ခံရပါက အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူမှုများ ရှိလာတတ်သည်။
“patrimonialism” သဘောတရား လွှမ်းမိုးခံရသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်းနှင့်
စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းမှာ ယှဉ်တွဲနေတတ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနှင့် တက်လမ်းရှာဖွေခြင်းကို အားပေးလေ့မရှိ။
နိုင်ငံရေးအရ အခွင့်အလမ်း ရှိနေသော အုပ်ချုပ်သူများ၏ အသိုင်းအ၀ိုင်းများအား မှီခိုမှုများကို
အားပေးလေ့ရှိသည်။ ဥပမာ- စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်လျှင် နိုင်ငံရေးအခွင့်အာဏာရှိနေသော
စစ်တပ်တွင်း၌ အရေးပါသော ရာထူးများ ရရှိစေရန် အားပေးချီးမြှောက်သည့် လူအများ
ပေါ်ထွက်လာမည်။ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများက နိုင်ငံရေးအာဏာ ရပြန်လျှင်လည်း အဆိုပါ
လူအများသည်ပင် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်များအား ထောက်ခံအားပေးကြမည်ဖြစ်သည်။
“patrimonialism” သဘောတရား လွှမ်းမိုးခံရသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ယင်းသို့သော လူများ
အဆိုပါ သဘောတရားသည် နိုင်ငံရေးအာဏာကို မှီတွယ်ခြင်း စိတ်သဘောနှင့် ဆက်စပ်နေလေရာ
နိုင်ငံရေးအာဏာကို ပြန်လည် ထိန်းညှိမည့် inherent logic of strong civil society ကို ထောက်ခံ
အားပေးခြင်း မရှိ။ သို့ဖြစ်ရာ civil society အဖွဲ့အစည်းများ အများအပြား လိုအပ်သည့် political
liberalization ကို နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာစေမှုများ ဖြစ်လာစေနိုင်သည်။ အဆိုပါ သဘောတရား၏
လွှမ်းမိုးမှု လျော့နည်းလာသော လူ့ဘောင်သစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်မှသာ political liberalization
အတွေးအခေါ်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ အရောက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(၃) စီးပွားရေး ဖံွ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ
အာဏာရှင်များဘက်မှ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့် အနည်းငယ်
ပေးလာခြင်း စသည်တို့တွင် နိုင်ငံစီးပွားရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်သော အခြေအနေများ
ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းများပြီး၊ အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်း
မြင့်မားနေပါက အရပ်သားပြည်သူလူထုကို နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်ခွင့် အနည်းငယ် ပေး၍ စိတ်ဝင်စားမှု
အာရုံပြောင်းပေးရသည်။ ယင်းသို့ မဟုတ်လျှင် စီးပွားရေး ဆုပ်ယုတ်မှု အခြေအနေပေါ်မူတည်၍
အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး စနစ် လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။
အချို့က ဆိုတတ်ကြသည်။ အာဏာရှင်များက ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ပေးပဲ အာဏာဆက်သိမ်းလျှင်လဲ
ရပါလျက် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးသည်မှာ အာဏာရှင်ဘက်က သဘောထား
ပျော့ပျောင်းလာခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဆိုတတ်ကြသည်။ အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ စတင်သည့် political
liberalization ဖြစ်ရပ်အချို့အတွက် ဤအဆိုမှာ မှန်ကောင်းမှန်မည် ဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်ရပ်တိုင်း
တွင်ကား မဟုတ်ချေ။ ခွေးတကောင်ကို အပြင်သို့ ခေါ်၍ လမ်းလျှောက်ထွက်ပါက လက်ထဲတွင်
အတင်းဆုပ်ပြီး ကိုင်ထား၍ မရ။ မထင်မှတ်ချိန်တွင် လွတ်ထွက်သွားနိုင်သည်။ လမ်းလျှောက်ခွင့်၊ ပြေးခွင့်
အနည်းငယ်ကိုတော့ ပေးရသည်။ ကိုင်ထားသော ကြိုးကို လိုသလို အဆွဲအဆန့် လုပ်နိုင်ဖို့သာ
လိုသည်။ political liberalization ဆိုသည်မှာလည်း ဤနည်းနှယ်နှယ်ပင်။ လွတ်ထွက်သွားမည်စိုး၍
ကြိုးတန်းလန်းဖြင့် လွတ်လပ်ခွင့် ပေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
၁၉၇၃ ခုနှစ်က အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် Sadet က တံခါးဖွင့် စီးပွားရေး မူဝါဒကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ တံခါးဖွင့်
စီးပွားရေး မူဝါဒ ကျင့်သုံးချိန်တွင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အခြားသော macro-economic
arrangements များကို မပြုလုပ်သောကြောင့် လက်တဆုပ်စာ လုပ်ငန်းရှင် တစုသာ ပေါ်ထွက်လာပြီး၊
တိုင်းပြည်တွင် ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟနှုန်းက မတရား ထိုးတက်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင်
အခြေခံစားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများက တရဟော ထိုးတက်သွားပြန်ရာ နိုင်ငံနှင့် အ၀ှမ်း ဆန္ဒပြပွဲများ
ပေါ်လာတော့သည်။ အဆိုပါ အခြေအနေများ ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း မရှိစေရန် အီဂျစ်အစိုးရက
အတိုက်အခံပါတီများကို ပါတီထောင်ခွင့် ပေးလိုက်သည်။ လူအများကို လွတ်လပ်စွာ စုဝေးခွင့်၊
ပြောဆိုခွင့် အနည်းငယ် ပေးလိုက်သည်။
စိတ်ပညာသဘောအရ လူတယောက်၏ စိတ်ထဲတွင် ပိတ်လှောင်မွန်းကြပ်နေမှုကို လွတ်လပ်စွာ
ဖော်ထုတ်ခွင့် ပေးလိုက်သည့်အခါ ထိုလူ၏ စိတ်ထဲတွင် ပေါ့ပါးသွားလေ့ရှိရာ အာဏာရှင်အစိုးရသို့
စုပြုံလာသော မကျေနပ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခွင့်ပြု လိုက်ခြင်းဖြင့် မကျေနပ်မှုများ ပေါက်ကွဲထွက်သွားပြီး
ဆန့်ကျင်သည့် အဆင့်သို့ မတက်လှမ်းတော့ပဲ ပြီးသွားတတ်သည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံအပါအ၀င်
အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံအများစုတွင် တတိယလှိုင်း ဒီမိုကရေစီ လှိုင်းလုံးကြီးနှင့် မျောမပါပဲ
အာဏာရှင်အစိုးရများ ရပ်တည်နေနိုင်သည့် အကြောင်းအချက်များတွင် ဤအချက်ကလဲ တချက်
အပါအ၀င်ပင်ဖြစ်သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှ နိုင်ငံများတွင် political liberalization အတွေးအခေါ်
လွှမ်းမိုးခ့သဲ ည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ တက်လှမ်းခြင်း မရှိပဲ
ရပ်တန့်နေခ့သဲ ည်မှာလဲ ကာလအတန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေ political liberalization
အတွေးအခေါ်သည် အာဏာရှင် အစိုးရများမှ အာဏာကို အသွင်သဏ္ဍာန်တမျိုးဖြင့်
ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်စေရေးအတွက် ဆေးကောင်းတခွက်ပင် ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး
အကျပ်အတည်း ပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် အာရုံပြောင်းပေးနိုင်သည့် မျက်လှည့် ဆရာ
တပါး ဟုလည်း ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် political liberalization နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့သည် လုံးဝ ဆက်စပ်ခြင်း
မရှိသည်ကား မဟုတ်။ political liberalization လုပ်ချိန်နှင့် တပြိုင်နက်တည်းတွင် economic
liberalization ကိုပါ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ အသွင်ပြောင်းကာလ စီးပွားရေး အခြေအနေကို
မှန်ကန်သော မူဝါဒများ ချမှတ်၍ ရလဒ်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။
Transition-induced contraction ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း ကျဆင်းခြင်းကို
ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်မည့် မူများ ချရမည်။ supplier-buyer relationship ကို ဖရိုမရဲ မဖြစ်စေရန်
အသွင်ကူးကာလ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် အရေးကြီးသော ဧရိယာ သုံးမျိုးဖြစ်သော
liberalization of internal markets, liberalization of external markets, privatization and
restructuring စသည်တို့တွင် သင့်လျော်သော မူဝါဒများ ချမှတ်ရန် လိုအပ်သည်။ အသွင်ကူးကာလ
စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် shock therapy နှင့် gradual reform
strategy တို့အနက် အချိန်ကာလနှင့် ကိုင်ညီသည့် မဟာဗျူဟာကို ရွေးချယ်နိုင်မှုကလည်း
စီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးရွားမှုကြောင့် political liberalization စတင်လာခြင်း ဖြစ်သော်လည်း၊
တက်လာသည့် အစိုးရသစ်မှ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမည့် စီးပွားရေးမူဝါဒများကို မှန်မှန်ကန်ကန်
အသုံးချနိုင်လျှင် liberalization နှင့် economic growth တို့အကြားတွင် positive relationship
ဖြစ်လာနိုင်သည်ဖြစ်ရာ economic reform များ၏ adverse effects များကို ထိန်းချုပ်ရန်
နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် economic growth တို့အကြားမှ
ဆက်စပ်မှုမှာ positive တခုတည်း မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုကြရန် လိုအပ်သည်။ political
liberalization နှင့် economic liberalization တို့ တပြိုင်တည်း ဖြစ်မလာပါက negative marginal
effects များ ပေါ်ထွက်လာတတ်ပါသည်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ဒီမိုကရေစီသည် နိုင်ငံရေး မသေချာမှုနှင့် ဆက်စပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရများသည် ရွေးကောက်ပွဲများဖြင့် မူဝါဒ ချမှတ်နိုင်ရေးကို ကြိုးပမ်းကြရသည်ဖြစ်ရာ
စီးပွားရေး မူဝါဒ သက်တမ်းများသည် ရွေးကောက်ပွဲသက်တမ်းဖြင့် အချိန်မတူညီပဲ economic reform
၏ ရေတို adverse effects များ နောက်တကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ပေါ်ထွက်လာပြီး၊
ရွေးကောက်ပွဲသစ်တွင် နိုင်ငံရေးအရ backlash ဖြစ်မည်ကို အာဏာရပါတီများက
စိုးရိမ်လေ့ရှိကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ရေတိုတွင် နှောင့်နှေးသော်လည်း ရေရှည် အကျိုးစီးပွားကို
ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည့် မူဝါဒများကို ရှောင်ကြဉ်၍ ရေတိုအကျိုးစီးပွားကိုသာ ကြည့်တတ်ကြလေရာ
ဒီမိုကရေစီ အခြေခံသဘောတရားဖြစ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ခြင်းကပင်လျှင် ရေရှည်စီးပွားရေး
တိုးတက်မှုကို ပြန်လည် ထိခိုက်လာသည်များလည်း ရှိတတ်ပါသည်။
အထက်ပါ အချက်များအပြင် political liberalization အတွေးအခေါ်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့
အရောက်သွားရေးတွင် အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်မည့် ပထ၀ီဝင် နိုင်ငံရေး အခြေအနေများ၊
နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး အခြေအနေများနှင့် လူမှုရေး အခြေအနေများစွာလဲ
ရှိပါသေးသည်။ Political liberalization ဆိုင်ရာ ကျမ်းတစောင် မဟုတ်၍ အကျယ်မချဲ့လိုတော့ပါ။
Political liberalization အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်စွဲ၍ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို အရောက်ချီရန်
ရည်ရွယ်သူများအနေဖြင့် အဆိုပါ အခြေအနေများကို နားလည်သိရှိထားကြရန် လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရသော် ယနေ့ လက်ရှိ ကာလသည် အတွေးအခေါ်များ အလွန် ရှုပ်ထွေးနေသည့် ကာလတခု
ဟု ဆိုရပေမည်။ အာဏာရှင်များဘက်မှ political liberalization ကို အကောင်အထည်
စတင်ဖော်လိုက်သည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ political liberalization ကို လက်ခံမည်လား၊ လက်မခံဘူးလား၊
အဆိုပါ အတွေးအခေါ်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင်သည်လား၊ မရနိုင်ဘူးလား၊ အစဉ်အဆက်
ကျင့်သုံးခြဲ့ကသော အာဏာရှင်စနစ်ဖြိုချရေး အတွေးအခေါ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားမည်လား၊
မဆုပ်ကိုင်ထားဘူးလား၊ ဆုပ်ကိုင်ထားလျှင်ကော အောင်မြင်မည်လား၊ မအောင်မြင်ဖူးလား စသည်တို့ကို
တွေးတော ငြင်းခုန်နေကြရုံသာမက အတွေးအခေါ် နှစ်ခုကို ရောသမမွှေထားသည့် နိုင်ငံရေးလိုလို၊
အန်ဂျီအိုလိုလို အတွေးအခေါ်သစ်များပင် ထွန်းကားလာသည့် ကာလတခုဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိနိုင်ငံရေးကို လွှမ်းမိုးထားသည့် အတွေးအခေါ်များနှင့် အုပ်စုများကို ခွဲခြားလိုက်ပါက အုပ်စုကြီး
(၁) Initial Transition အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံ၍၊ အဆိုပါ အတွေးအခေါ်က ဦးဆောင်သည့်
လမ်းစဉ်များကို ဖော်ဆောင်ပါက ရေတိုပန်းတိုင်အနေဖြင့် ကြားဖြတ်အစိုးရ (၀ါ) ပြည်သူ့အစိုးရ
အသွင်သဏ္ဍာန် တမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်ရမည်ဟု စဉ်းစားသူများ
(၂) Political Liberalization အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံ၍၊ အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ ဖွင့်ပေးလိုက်သော
political space များကို အသုံးချကာ နိုင်ငံရေးစည်းဝိုင်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပြီး၊ တစတစ
ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများမှတဆင့် ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်းမည်ဟု စဉ်းစားသူများ
(၃) Political Liberalization မှ democratic consolidation ဖြစ်အောင်
ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ initial transition မှ democratic consolidation ဖြစ်အောင်
တည်ဆောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ civil society မှာ အဓိကကျသဖြင့် နိုင်ငံရေးရာများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း
မရှိပဲ civil society အားကောင်းလာစေရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟု စဉ်းစားသူများ
(၄) ဘယ်သူသေသေ၊ ငတေမာရင် ပြီးရော ဆိုသည့် သဘောပိုက်ကာ ဖြစ်လာသည့် အခြေအနေတွင်
အာဏာ၊ ရာထူး၊ နေရာ၊ အမည်ကောင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား စသည့် အကျိုးအမြတ်များအား မည်သို့
ရှာမည်နည်း ဆိုသည်ကို စဉ်းစားသူများ
(၅) Initial transition အတွေးအခေါ်ကိုလည်း အပြည့်အ၀ လက်ခံခြင်းမရှိ၊ political liberalization
အတွေးအခေါ်ကိုလည်း အပြည့်အ၀ လက်ခံခြင်း မရှိသော ရောသမမွှေများ
(၆) political liberalization အတွေးအခေါ်ကို အသုံးပြု၍ အာဏာကို တတ်နိုင်သမျှ ဆွဲဆန့်ထားရန်
ကြိုးပမ်းနေသော အာဏာရှင်များနှင့် အပေါင်းအပါများ
အဆိုပါ အုပ်စုခြောက်မျိုးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်ကံကြမ္မာအတွက် အာဏာရှင်နှင့် အပေါင်းအပါများ
နည်းတူ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အုပ်စုမှာ ရောသမမွှေများ ဖြစ်ပါသည်။ political liberalization
အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံပြီး၊ political space ကို အသုံးပြုလိုသူများမှာ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို
ရောက်လေမည်လားဟု စမ်းလိုသော စေတနာပါသဖြင့် ရောသမမွှေများလောက်
ကြောက်ဖို့မကောင်းလှပါ။ အာဏာရူးအခွင့်အရေးသမားများမှာလဲ ၄င်းတို့ ရူးကြောင်းကို လူထုက
သိနေပြီး ဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော်ကံကြမ္မာအတွက် အန္တရာယ် မရှိလှပါ။
သို့ရာတွင် ရောသမမွှေများမှာကား Initial transition အတွေးအခေါ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားသူများဟု
လူအများက မြင်ထားလေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသူများသည် initial transition ၏
ရေတိုပန်းတိုင်ဖြစ်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ထွက်ရေးကို လက်ခံခြင်းမရှိကြ။ political liberalization
အတွေးအခေါ်အရ ပေါ်ထွက်လာသော political space တွင်လည်း ပါဝင်ခြင်း မရှိကြ။ သို့ရာတွင်
political liberalization အရ ချဲ့ထွင်လာသော public space အခွင့်အရေးကို ယူရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။
ယင်းသို့ ကြိုးပမ်းပြီးမှ initial transition အတွေးအခေါ်၏ ရေတိုပန်းတိုင်ဖြစ်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ
ပေါ်ထွက်ရေးကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမည်လားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပြန်။ civil society
အားကောင်းလာရေးကိုပဲ ဦးစားပေး လုပ်တော့မည်လိုလိုကလဲ ဖြစ်လာပြန်သေးတော့သည်။
ပမာဆိုရလျှင် မြစ်ကမ်းတဘက်ဆီတွင် လမ်းလျှောက်ရင်း ဟိုဘက်ကမ်းသို့ လှေနှင့် ကူးလိုက်၊
ဒီဘက်ကမ်းသို့ လှေနှင့် ကူးလိုက် လုပ်နေသည်နှင့် တူလှသည်။ လှေရှိသူများက ကူးချည်သန်းချည်
လုပ်ရန် မခက်ခဲသော်လည်း နောက်က တကောက်ကောက် လိုက်သူများမှာကား ရေထဲ ကျလိုကျ၊
မောပြီး ကမ်းပါးမှာ ငုတ်တုပ်ထိုင်သူက ထိုင်နှင့် ခရီးမတွင်ပဲ ဖြစ်နေကြရတော့သည်။ ပိုဆိုးသည်က
အတွေးအခေါ် နှစ်ရပ်လုံးကို ရောသမမွှေထားကြလေရာ Initial Transition အတွေးအခေါ်က
ဦးဆောင်သည့် လမ်းများပေါ်တွင်လည်း ကန့်လန့်ကန့်လန့်၊ political liberalization အတွေးအခေါ်က
ဦးဆောင်သည့် လမ်းများပေါ်တွင်လည်း ဖျက်လိုဖျက်ဆီးသဏ္ဍာန် ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်လေသည်။
အဆိုပါ အတွေးအခေါ် ရှုပ်ထွေးမှု အခြေအနေများသည် နိုင်ငံတော်အနာဂတ်ကံကြမ္မာအတွက်
အန္တရာယ်ကြီးပါသည်။ မည်သည့် အတွေးအခေါ်ကို ကျင့်သုံးသင့်သည် ဆိုသည်မှာ လူတယောက်၊
အဖွဲ့အစည်းတခု၏ ကိုယ်ပိုင် ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါသည်။ လူ့သဘာဝအရ အမြင်မတူလျှင် အပြန်အလှန်
စွပ်စွဲမှုကတော့ ပေါ်ထွက်နေမည်သာ ဖြစ်သည်။ initial transitionအတွေးအခေါ် ရှုထောင့်မှ
ကြည့်လျှင် political liberalization အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်စွဲကာ political space တွင်းသို့
၀င်သွားသူများသည် အရှုံးပေး၊ အညံ့ခံသူများ ဖြစ်ပြီး၊ political liberalization အတွေးအခေါ်မှ
ကြည့်လျှင် initial transition ကို လက်ခံသူများသည် compromise မလုပ်လိုသော
နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ အပြန်အလှန်ရှုမြင်ပြီး၊ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲပိုင်ခွင့်
ရှိသော်ငြား ထိုသို့ စွပ်စွဲရင်းဖြင့် အချိန်မကုန်ကြစေလိုပါ။ initial transition လက်ခံသူများကလဲ
ပါးစပ်ဖြင့် အာနေခြင်းများကို လျှော့ချ၍ ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်သဏ္ဍာန်တမျိုးမျိုး ပေါ်လာရေးကို
ကြိုးပမ်းသင့်ကြပါသည်။ political liberalization လက်ခံသူများကလဲ ချဲ့ထားသည့် political space
လေးတွင်းသို့ ဘယ်လိုနည်းဖြင့် ၀င်ရ၀င်ရ၊ ရအောင်ဝင်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို အပြောမဟုတ်ပဲ
ပန်းတိုင်မရောက်ခင် တက်မထောင်ချင်သော မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အစဉ်အလာဆိုးကြီးကို အလုပ်ဖြင့်
သက်သေပြ၍ ဖျောက်ဖျက်သင့်ကြပေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ initial transition
က ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည်လား၊ political liberalization က ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည်လား
ဆိုသည်မှာကား မူအရဆိုလျှင် အဖြေထွက်သော်လည်း လူအရဆိုလျှင် အဖြေမရှိပါ။ မည်သူမျှ
တပ်အပ်သေချာ ပြောနိုင်မည်လည်း မဟုတ်သဖြင့် ငြင်းခုန်ရင်း အချိန်မဖြုန်းသင့်ကြတော့ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊
အဖွဲ့စွဲများကို ဖယ်ရှား၍ အတွေးအခေါ် တခုကို ရွေးကြရမည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းသို့ ရွေးချယ်ရာတွင် အခြေအနေနှင့် လားရာကို သဘောပေါက်ပြီးမှ၊ ပန်းတိုင်ကို သိပြီးမှသာ
ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ရွေးချယ်ပြီးလျှင်လည်း ရှင်းလင်းသည့် အတွေးအခေါ်က
ဦးဆောင်သော ပြတ်သားသည့် လမ်းစဉ်များကို ချမှတ်ရပါမည်။ လမ်းကြောင်းများကို
လျှောက်လှမ်းရပါမည်။ အတွေးအခေါ် ရှုပ်ထွေးနေလျှင် လမ်းစဉ်များေ၀၀ါးနေတတ်သဖြင့်
ပန်းတိုင်နှင့်လဲ အစဉ်အမြဲ ဝေးနေဦးမည်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါသည်။
(စာကြွင်း- ဤစာကို ရေးသားရာတွင် ကော်ဖီနှင့် လက်ဖရည် ဘယ်အရာက ပိုကောင်းသလဲ ဆိုသော
မေးခွန်းသဏ္ဍာန်ကို ဖြေရာ၌ ကော်ဖီ၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးနှင့် လက်ဖရည်၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး
နှစ်မျိုးစလုံးကို ယှဉ်တွဲဖြေဆိုသော ရှုထောင့် မှ ရေးသားထားသည်။ ကော်ဖီနှင့် လက်ဖရည်
ဘယ်အရာကို ပိုကြိုက်သလဲ ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မေးခွန်းသဏ္ဍာန်ကို စာဖတ်သူတဦးဦးမှ
မေးလာပါလျှင်ကား initial transition နှင့် political liberalization အတွေးအခေါ် နှစ်ရပ်တွင် စာရေးသူ
ယနေ့အချိန်အထိ လက်ခံကျင့်သုံးနေသော အတွေးအခေါ်မှာ initial transition အတွေးအခေါ် ဖြစ်ပြီး၊
လမ်းစဉ်မှာ လူထုတိုက်ပွဲလမ်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ရေတိုပန်းတိုင်မှာ အတိုက်အခံများက ဦးဆောင်သော
ကြားဖြတ်အစိုးရ (သို့မဟုတ်) လူထုတိုက်ပွဲတွင် ပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်းလာသော မျိုးချစ်
တပ်မှူးများနှင့် အတိုက်အခံများ ပူးတွဲဖွဲ့စည်းသော ကြားဖြတ်အစိုးရဖြစ်ပါသည်)
ABDELNASSER, Gamal. (2004): “Egypt: Succession Politics,” Volker Perthes (ed.), Arab
Elites: Negotiating the Politics of Change, (ed.), Boulder: Lynne Rienner Publishers.
Alesina, Alberto, and Allan Drazen (1991), “Why Are Stabilizations Delayed?” American
Economic Review 81 (5), 1170-1188.
Avant, Deborah. (1994) Political Institutions and Military Change: Lessons from Peripheral
Wars. Ithaca, NY: Cornell University Press
Denizer, Cevdet (1997), Stabilization, Adjustment and Growth Prospects in Transition
Economies, Policy Research Working Paper No. 1855, The World Bank, Washington, DC.
CHASE, Robert S.; HILL, Emily B. ve KENNEDY, Paul (1996): “Pivotal States and U.S.
Strategy,” Foreign Affairs, 75: 33-51.
Finer, Samuel. (1962). The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics . New
Fitch, J. Samuel. (1998). The Armed Forces and Democracy in Latin America . Baltimore:
GALA, Amin A. (1995): Egypt’s Economic Predicament: A Study in the Interaction of
External Pressure, Political Folly and Social Tension in Egypt. 1960-1990. New York, E. J.
Heybey, Berta, and Peter Murrel (1999), “The Relationship between Economic Growth and
the Speed of Liberalization During Transition,” Journal of Policy Reform3(2), 121-137.
Halpern, Manfred. 1963. The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa.
KRAMER, Gudrun (1996): “The Integration of the Integrists,” Ghassan Salame (ed.),
Democracy without Democrats, London, New York, I.B. Tauris.
LINZ, Juan J. ve STEPAN, Alfred (1996): Problems of Democratic Transition and
Consolidation, Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore,
Lipset, S.M. (1959), “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and
Political Legitimacy,” American Political Science Review 53, 69-105.
Monshipouri, Mahmood. (1995) Democratization, Liberalization and Human Rights in the
Third World. London: Lynne Rienner Publishers
Parry, Geraint and Moran, Micheal, eds. (1994) Democracy and Democratization. New
Przeworski, Adam, and Fernando Limongi (1993), “Political Regimes and Economic
Growth,” Journal of Economic Perspectives7(3), 51-69.
Rodrik, Dani (1995), “The Dynamics of Political Support for Reforms in Economies in
Transition,” Journal of the Japanese and International Economies9(4), 403-425.
Wolff, Holger C. (1999), Transition Strategies: Choices and Outcomes , Princeton Studies in
International Finance No. 85 (June), Department of Economics, Princeton University,